Unyaka omusha - iholide ongaqondakali futhi imilingo. Wakhe abathandwa abadala ikakhulukazi izingane. Zonke ngabomvu isikhathi kufike uNyaka Omusha kanye iwashi chiming ukuqagela izifiso imfihlo kakhulu. Izingane leli holide etotoswa ngezipho namaswidi. Ngakho-ke, angabizwa ngokuthi bafuna kakhulu futhi yiholidi kuzo zonke izizukulwane.
Abantu abaningi lapho kuqala uNcibijane amathemba okusezingeni eliphezulu futhi elinde ezinye uhlobo ushintsho. Abaningi bayakholelwa ezihlukahlukene izibikezelo kaNcibijane namabika. Ngezinye kulo mkhosi njengamanje, kukhona izinto eziningi. Bona siqaphelisise cishe konke kulo ngenkolelo yokuthi lelo liyobenza inhlanhla.
Inkolelo-ze - wukuthi kukhona empilweni eziningi abantu. Lesi simo sengqondo enenhlonipho ukuba uNcibijane ilethe eziningi ukuthatha. Kukhona amasiko ngokuqinile ukuthi badunyiswa kuzo zonke ekhaya. Omunye wabo isihlahla sikaKhisimusi. Sigqoke phezulu yiyo yonke imikhaya. Kungakhathaliseki ukuthi isihlahla bokuzenzela noma bukhoma, iletha nalo esimweni zemikhosi. Ngokwesiko, ke lihlotshiswe amathoyizi kanye nemiklamo. Ungenza Christmas amathoyizi ngezandla zabo futhi uwulethe umsebenzi izingane.
Yaba bendabuko kaNcibijane izibikezelo, izifiso kanye nezipho. Esikhathini Unyaka omusha ufisa nomunye kuphela engcono ezinhle. Izipho ngokukhetha ezihlukahlukene. Bathembele ukunambitheka namaphunga izintandokazi lomuntu. Izingane beyokwamukela iyiphi amathoyizi kanye amaswidi. New Year izibikezelo ziqondakala eziningi njengento ebaluleke kakhulu. Abantu abaningi zama ukuthola ukuthi yini ezilungele bona esikhathini esizayo esiseduze. Kuze kube yimanje, yakhetha ngezindlela ezihlukahlukene. Ezinye ukubhala amanothi amancane nge izifiso zakhe, wazifaka ngaphansi komcamelo wakhe. Ukuvuka ngosuku lokuqala onyakeni omusha, kubalulekile ukuthola ucezu lokuqala etholakalayo lephepha nokufunda esizayo. Indlela ejwayelekile kakhulu - kuyisifiso ukubhala kwi napkin ngaphansi iwashi chiming awushise, uthele umlotha kulawo ingilazi champagne futhi ukuwaphuza. Uma ukwazi ukukwenza kuze iwashi uyalimaza, ke kufihlwe kweqiniso.
Enye indlela ungafunda lekusasa. Esikhathini uNcibijane , ugcwalise isitsha amanzi baphonse in kancane usawoti, ushukela kanye umlotha. Khona-ke wabeka emuva izinwele ezimbalwa futhi constricted yabo. Uma ekuseni uyobe izinwele okwakuthandelene ndawonye, futhi uma ukuhlakaza ndawonye kungabi phetho. Ungakwazi ebhula encwadini. Beka isandla sakhe sobunxele, isifiso. Ngavula ncwadi wangifundela ibinzana esavela ngaphansi kwesandla sobunxele, ngeke azi ukuthi alindele ini.
Ukuhlela iholide kaNcibijane, kungenzeka ukuba banakekele izimfanelo zayo. Bhaka amakhukhi, imali ngamunye izibikezelo short kaNcibijane. Yilowo nalowo ababekhona ukuthatha omunye isibindi futhi bazi ukuthi yini emlindele ngonyaka ozayo. Yiqiniso, konke lokhu okwenzekayo ngendlela encokola. izibikezelo kaNcibijane kumelwe sibe bahle kuphela. Lokhu ukubhula efana hhayi kuphela abantu abadala, kodwa futhi izingane.
Ezinganeni esingazilungisa imincintiswano kumnandi noma imiklomelo esihlwabusayo. Bangase bathathe ingxenye kanye nabantu abadala. Umhlangano ahlelwe kahle isikhathi kufike uNyaka Omusha, ngeke wenze leli kube yiholide ongenakulibaleka. Zonke nabangani kanye nomndeni wakho zingenziwa izipho ezincane, ngisho ezihlekisayo.
Kuyinto bendabuko futhi ngokucebile wu etafuleni unyaka omusha. Kwenzeka kanjalo ukuba kusihlwa ukupheka izitsha okumnandi kakhulu futhi engavamile. Futhi-ke, ayikho kulezinkulumo New Year kuqedile ngaphandle champagne. It is wavula ngaphansi iwashi chiming, behalalisela nomunye eholidini.
Unyaka omusha ukugubha senzeka yonke indawo. Le iholidi kuhambisana eziningi ongaqondakali futhi engavamile. Nokho-ke akudingekile ukuba sikuthathe njengokungathi sína nezibikezelo New Year. Sidinga nijabula wonke umuntu hhayi uthole ivalile kulokho wathembisa onyakeni omusha. Singabantu bezindonga ikusasa labo siqu. ukuphila kwethu okuxhomeke kulo kithi. Kholwa amabika nokuqagela kungaba, kodwa hhayi fanatically. Ngaphezu kwalokho, izibikezelo kaNcibijane ngokuvamile ezihlekisayo ngokwemvelo futhi zenziwa ukwenza iholide kwajabulisa nakakhulu. Akufanele sibakhohlwe ngakho.
I simo yekhonsati Unyaka omusha izingane
Shrovetide simo e zasenkulisa ngaphandle futhi endlini
Yini okufanele ngiyenze uma ngilahlekelwa ilungelo ukushayela imoto?
Design of umhubhe encane, izinhlobo emaphasishi esikoleni
Izitsha ezihlwabusayo futhi ezinempilo: iresiphi ye-aubergine
Umzila ezithakazelisayo: Sukhumi Military Road